ကနေဒါနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲ
ကနေဒါဗဟိုဘဏ်ရဲ အတိုးနှုန်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဒီဇင်ဘာ ၆ရက် ၁၇:၀၀ MT အချိန်မှာ ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါသည်. ထုတ်ပြန်မည့် အတိုးနှုန်းဆုံးဖြတ်ချက်သည် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေနှင့် အနာဂတ်ငွေကြေးမူဝါဒအပေါ် ဗဟိုဘဏ်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒရေးဆွဲသူ အကြီးအကဲများ၏ အမြင်ဖြင့် သုံးသပ်ဆွေးနွေးပြီးမှ အတိုးနှုန်း တင်၊ မတင်ကို ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်. ထို့ကြောင့် ဤအတိုးနှန်းဆုံးဖြတ်ချက်သည် ကနေဒါငွေကြေး CADအပေါ် သက်ရောက်မှုပြင်းသည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ကနေဒါဗဟိုဘဏ်သည် ဇူလိုင်လနှင့် စက်တင်ဘာလများတွင် အတိုးနှုန်းတင်ခဲ့သော်လည်း အနာဂတ်ငွေကြေးမူဝါဒအပေါ် ဗဟိုဘဏ်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒရေးဆွဲသူ အကြီးအကဲများအနေဖြင့် စောင့်ကြည့်ဆဲအခြေအနေဖြစ်နေပုံရပါသည်. ယခုဆွေးနွေးပွဲတွင် အတိုးနှုန်းတင်ဖို့ ခိုင်မာတဲ့မှတ်ချက်များမရှိဘဲ လေသံပျော့ခဲ့ပါက ကနေဒါဒေါ်လာတန်ဖိုး ကျဆင်းနိုင်ပါသည်. ထိုသို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါက USD/CADကို ၀ယ်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်.